धनकुटामा भीषण असिना पानी, करोडौंको बाली छिनभरमै स्वाहा ! (फोटो फिचर) : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks धनकुटामा भीषण असिना पानी, करोडौंको बाली छिनभरमै स्वाहा ! (फोटो फिचर)
धनकुटा । धनकुटामा बिहीबार साँझ भीषण असिना पानी परेको छ । साँझ करिब ५ बजेबाट हावाहुरीसहित असिना पानी परेको हो । करिब एक घण्टा परेको असिना पानीले जिल्लामा करोडौं मूल्य बरावरको तरकारी बाली नष्ट गरेको किसानहरुले बताएका छन् ।
धनकुटाको उत्तरी भागमा तीन फिटसम्म वाक्लो असिना जमेको छ । अत्याधिक परेको असिनाले तरकारी बाली ढाक्दा ठूलो क्षति पुगेको सिधुवाका अगुवा कृषक मेघेन्द्र गुरुङले बताए । ‘एक घण्टा परेको असिनाले यो क्षेत्रमा १३ करोड भन्दा बढीको तरकारी बाली सखाप बनायो,’ कृषक गुरुङले भने,‘अहिलेसम्म यत्रो धेरै असिना परेको थाहा थिएन । यसपटक त सबै स्वाहा पार्यो ।’
छथर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नं. ६ को पुरै भाग, वडा नं.२ र ५ को केही भाग तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नं.८ र ९ तथा वडा नं.१ का केही भागमा लगाइएको केराउ, रायोको साग, फुलगोभी लगायत तरकारी बाली असिनाले सखाप पारेको छ । सिधुवा, चित्रे, नुनथला लगायत क्षेत्रमा झण्डै तीन फिटसम्म असिना जमेको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।
सडकमा वाक्लो असिना जमेका कारण कोशी राजमार्गको सिधुवा–बसन्तपुर सडकखण्ड अवरुद्ध बनेको छ । अत्याधिक असिना परेर सडक पुरिदा सिधुवा–बसन्तपुर सडकमा सवारी अवतजावत हुँन नसकेको हिलेका व्यावसायी उज्वल कटेलले जानकारी दिए । तीन फिटसम्म असिना जमेकाले तत्काल असिना सुक्ने संभावना नदेखिएको कटेल बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘तेह्रथुम हिडेको असिना परेर सडक पुरिदा सिधुवा–चित्रेबीच बाटोमै अलपत्र परियो । डोजर ल्याएर सडकको असिना पन्साउँने पहल भइरहेको छ । नत्र भोलिसम्म पनि सडक खुल्ने संभावना छैन ।’
यसैबीच, हावाहुरीसहितको असिना पानीका कारण धनकुटामा विद्युत अवरुद्ध भएको छ । धरानबाट आउने ३३ केभी लाईन मै समस्या आएकोले धनकुटामा बिद्युत अवरूद्ध भएको हो । धेरै तिर पोलहरू भाचिएको खबर आइरहेकाले लाइन मर्मतको काम भइरहेको विद्युत प्राधिकरण धनकुटा वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
दाङ । यहाँ पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका गढवा गाउँपालिकाका दुई जनालाई कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याइएको छ । गए रातिदेखि अस्पतालको आइसोलेशनमा राखेर...
Breaking News रबिन कटेल - July 26, 2020 0
तुलसीपुरमा बालिका बलात्कारको आरोपमा एक युवक पक्राउ
प्रदेश ५ रबिन कटेल - February 5, 2021 0
तुलसीपुर । तुलसीपुरमा १४ बर्षकी बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा एक किशोर पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका १० निबासी लल्लु वली (नाम...
प्रदेश ५ रबिन कटेल - June 1, 2020 0
Editor-Picks रबिन कटेल - September 11, 2020 0
Editor-Picks रबिन कटेल - January 12, 2021 0
Not-to-be-missed रबिन कटेल - April 12, 2020 0
बिचार रबिन कटेल - October 16, 2020 0
प्रदेश रबिन कटेल - May 15, 2020 0
सप्तरी ,राजविराज । सप्तकोशी किनारमा बेबारीसे अबस्थामा मृत भेटीएकी एक नौ बषिया बालिकाको शव ४ दिन पछि शुक्रवार स्थानिय गजेन्द्र नारायण सिह अस्पतालको शव...
Breaking News रबिन कटेल - October 23, 2020 0
१७६ दिनपछि पहिलोपटक मृतकको संख्या शून्य
प्रदेश ३ रबिन कटेल - January 29, 2021 0
काठमाडौं । बिहीबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकामध्ये मृतकको संख्या शून्यमा झरेको छ । संक्रमितको संख्या घटिरहेको बेला मृतकको संख्या बिहीबार शून्यमा झरेको स्वास्थ्य...